Home Wararka Waare”Amniga Muqdisho faraho ka baxay”
Waare”Amniga Muqdisho faraho ka baxay”
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta ku soo laabtay Muqdisho kadib shirkii uu kaga qeyb galay magaalada Kismaayo ayaa wuxuu sheegay inuu gacanta ka baxay amniga Muqdisho.
Wuxuu sheegay dowladda federaalka in looga baahan yahay inay ka falceliso amni darada ka jirta magaalada Muqdisho, hadii aanay sidaasi sameyna ay tahay masuuliyad daro cad oo la dayacay.
Waare ayaa sheegay inay walal badan ay ka qabaan amniga Muqdisho, xildhibaanada Baarlamaanka ayuu ugu baaqay inay is ilaaliyaan oo ay aad u taxadaraan, maadaama uu tilmaamay inay korortay amni darada.
Madaxweyne Waare ayaa wuxuu kaloo tilmaamay inay walwal ka qabaan ciidanka NISA oo uu sheegay in la kala diray oo qaarkood lagu daray ciidanka Booliska, halka qaarka soo harayna uu sheegay in Hirshabeelle ay ku dhibayaan Jowhar iyo Beledweyne.
Hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wuxuu muujinayaa inuu xoogeystay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo sababtay in Madaxweynaha Soomaaliya uu madaxda dowlad goboleedyada isugu yeero kulan wadatashi ah 17 ilaa 18 bishan, kaasi oo lagu qabanayo Muqdisho.
Previous articleFarmaajo “Waxaa igu ballan ah in aan burburiyo HirShabelle & GalMudug (Daawo)
Next articleAqriso:Waare “Hirshabeelle Iyo Galmudug Hadii Ari Daganyahay Waa La Arki Doonaa”
Gal-mudug Daah-furtay Imtixaanaadka Dugsiyada dhexe
maxay kawada hadleen Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Agaasimaha Guud ee Hay’adda...